Golaha wasiirada cusub oo la filaayo in saacadaha soo socdo si rasmi ah loogu dhawaaqo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Golaha wasiirada cusub oo la filaayo in saacadaha soo socdo si rasmi ah loogu dhawaaqo
Waxaa saacadaha soo socdo la filayaa in ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu si rasmi ah ugu dhawaaqo xubnaha ka mid noqon doonno golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, kadib markii dhowr jeer hore ay ku dhawaaqistooda dib u dhacday.
Wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa saakay looga yeeray xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, iyadoona xilliyadda soo aadan la filaayo in si rasmi ah loogu dhawaaqo liiska golaha wasiirada cusub ee waqtiyadii ugu dambeysay dib u dhaca badan hareeyay.
Habeenkii xalay ayay aheyd markii xafiiska ra’iisul wasaare ee ku taalla xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya looga yeeray wariyaasha ka howlagala magaalada Muqdisho, si ay goob-joog uga ahaadaan shaacinta golaha wasiirada cusub, balse ay dib u dhacday.
Wasiirada cusub ayaa la sheegayaa inay ku jiraan wasiiro hore iyo kuwo ku cusub xilka wasiirnimo, waxayna tiro ahaan gaaraan illaa 25 wasaaradood, iyadoona magacaabista wasiiradaan uu muddooyinkii ugu dambeysay hareeyay muran ku saabsan shaqsiyaadka ka mid noqon lahaa iyo qaabka beel ahaan xilalka loogu qeybin lahaa.
Si kastaba ha ahaatee, maalintii shalay illaa iyo xalay ayaa la filaayay in si rasmi ah loogu dhawaaqo xubnaha ka mid noqon lahaa golaha wasiiradda cusub ee Soomaaliya, balse dib u dhac ayaa ku yimid, iyadoo la filaayo in maanta si kama dambeys ah loogu dhawaaqo.